भुलेर पनि नगर्नुस् यस्तो औँला हुनेसँग बिहे ! « Swadesh Nepal
भुलेर पनि नगर्नुस् यस्तो औँला हुनेसँग बिहे !
प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७६, आईतवार
तपाईको औलाले बताउन सक्छ कि तपाईको जीवनसाथी कस्तो हुन्छ समुन्द्र शास्त्रमा जीवनसाथीसँग जोडिएको केहि कुरा उल्लेख गरिएको छ।जसले भविष्यमा तपाईको जीवनसाथी कस्तो हुनेछ भन्ने जनाउँछ ।
समुन्द्र शास्त्रको अनुसार जुन मानिसको हातको औला नमिलेको मोटो र भद्दा हुन्छ , ती मानिसहरुलाई पत्नी सुख मिल्दैन । जीवनमा अभाव भइरहन्छ । शास्त्रमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ कि जसको हातमा औला आर्कषक हुन्छ उनीहरुलाई पत्नीको भरपुर सहयोग मिल्छ । यस्ता मानिसहरु सुखी जीवन विताउन सफल हुन्छन् ।
समुन्द्र शास्त्रको अनुसार जुन पुरुषको हातका औला लामो र सीधा हुन्छ ती व्यक्तिको पत्नी काम गर्न निकै तेज हुन्छन् । त्यस्तै जुन व्यक्तिको औला चुच्चो र छोटो हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिका पत्नी अत्याधिक गुणवान र तेज हुन्छन् । यस्ता मानिसहरुको जीवनमा जीवनसाथीको साथ मिलिरहन्छ । शास्त्रको अनुसार यदि हत्केलामा जुन व्यक्तिका हृदय रेखामा कुनैपनि प्रकारको दोष हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिका पत्नी उनीहरुसँग धेरै खुशी रहन्छन् ।
जुन मानिसको हात सामान्यभन्दा बढी र अत्याधिक कडा हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिको पत्नीसँग कुनै विशेष सुख मिल्दैन ।उनीहरुको हातमा गुरु पर्वत चाहिनभन्दा अग्लो छ भने त्यस्ता व्यक्तिको पत्नीका लागि अशुभ मानिन्छ । जुन पुरुषको हातको औला र चौडा छ यस्ता व्यक्तिलाई पत्नी सुख मिल्दैन । जीवनमा सधैँ उल्झनमा रहन्छ । घरमा सधैँ अशान्ति हुन्छ ।